चिया सेतो पिउने कि कालो ? यस्ता छन् मु’टुरो’ग विशेषज्ञ डा. रेग्मीका केही सुझाव…पूरा पढि सेयर गर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
चिया सेतो पिउने कि कालो ? यस्ता छन् मु’टुरो’ग विशेषज्ञ डा. रेग्मीका केही सुझाव…पूरा पढि सेयर गर्नुहोस् ।
काठमाडौं : संसारभरि पानीपछि सबैभन्दा धेरै पिइने पेयपदार्थ चिया नै हो । हामीले धेरै थरी चिया पिउने गर्छौं– दूध हालेको सेतो चिया, दूध–मसला दुवै हालेको मसला चिया, केही पनि नहालेको कालो वा हरियो चिया, आयु’वेर्दिक जडीबुटी मिसिएको हर्बल चिया आदि ।
धेरैले चियामा चिनी हालेर पिउँछन्, कसै–कसैले चिनी नहालेको चिया मन पराउँछन् । दूध, चिनी हाली आगोमा भकभकी उमालेर पकाएको चिया धेरैको रोजाइमा पर्छ । किनकि यो हामीलाई स्वादिलो लाग्छ । तर स्वास्थ्यका जानकारहरुले यस्तो चियाले स्वास्थ्यमा हानि पु¥र्‍याउँछ भनी खब’रदारी गर्छन् ।
यस्तो खबर’दारीलाई ध्यानमा राखेर केही मान्छेले चियामा दूध–चिनी केही पनि नमिसाई कालो चिया पिउने गर्छन् । कतिले त स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ भनेर हरियो चिया मीठो नलागे पनि पिउने गर्छन् ।
स्वास्थ्यका हिसाबले चिया सेतो, कालो या हरियो कुन फाइ’दाजनक छ भन्ने बारे धेरैलाई जान्ने उत्सु’कता छ । हामीले दिनदिनै २–४ कप चिया पिएकै हुन्छौं । यसबारे कुन राम्रो, कुन नराम्रो भन्ने जान’कारी लिनु सबैका लागि उपयोगी हुन्छ ।
हरियो र कालो दुवै चिया एउटै जातको क्या’मेलिया नामक वन’स्पतिबाट उत्पादन हुने गर्छ । चिया बगानबाट चियापत्ती टिप्दा त्यो हरियो हुन्छ अनि त्यसलाई प्रशोधन गरेपछि त्यो कालो हुन्छ । हरियो चिया भनेको सबैभन्दा कम प्रशो’धित चिया हो । चियाको पातलाई जति धेरै प्र शोधन गरिन्छ त्यति नै मात्रामा त्यसमा भएका गु’णकारी तत्व’हरु न’ष्ट हुँदै जान्छन् ।
यो हिसाबले कालोभन्दा हरियो चियालाई बढी स्वा’स्थ्यबद्र्ध”क मान्नुपर्छ । हरियो चियामा स्वास्थ्य’वद्र्धक तत्व पोलि’फिनोल र क्या’टेखिन बढी पाइन्छ भने कालो चियामा यिनीहरुको मात्रा अलि कम हुन्छ तर क्याफिनको मात्रा बढी हुन्छ । क्याफिनले शरीरलाई उत्तेजि’त पार्ने, नशा लाग्ने कारणले त्यति राम्रो मानिदैन ।
चियामा भएको गु’णकारी तत्वहरु पोलि’फिनोल आदिले मु’टु, हड्डी, पेट आदिलाई फाइदा गर्छ । यसले क्यान्सरको रोक’थाममा पनि मद्दत पु¥र्‍याउँछ । मधुमेह, उच्च रक्त’चापजस्ता समस्यालाई पनि कम गर्न सहयोग गर्छ ।
चियालाई धेरैबेर उमाल्यो, त्यसमा दूध र चिनी मिसायो भने पोलि’फिनोल, क्याटे’खिन आदि गुणकारी तत्वहरु नि’ष्क्रिय भैदिन्छन् । यसकारण स्वास्थ्यका हिसाबले सोझो अ’र्थमा चिया कालोभन्दा हरियो राम्रो, दूध–चिनी हालेको भन्दा नहालेको राम्रो ।
यो विज्ञानले बोलेको कुरो हो । तर मेरो विचार बेग्लै छ । मलाई लाग्छ, दूध–चिनी हालेर मज्जाले पकाएको १–२ कप मीठो चिया पिउँदैमा स्वास्थ्यलाई खासै केही नका’रात्मक असर पर्दैन । झन् उल्टो आनन्द आउँछ, चियाको मिठासमा मान्छे रमाउँछ र यसले स्वा’स्थ्यमा सका’रात्मक असर पार्छ ।
हामीले पोलि’फिनोल एन्टि’अक्सिडेन्ट चियाबाटै किन लिनुपर्‍यो । फलफूल, साग’सब्जी, गेडागुडी, ड्राइ’फ्रुट्स आदिबाट प्रशस्त फाइबर र एन्टिअ’क्सिडेन्ट पाउन सक्छौं । यी चिजहरु खाए भैहाल्यो नि ∕ चियाको स्वाद बिगारी–बिगारी ट\_र्रो चिया नै किन पिउनुप¥र्‍यो ∕ कोक, फान्टा, स्प्रा’इट, रेडबुलजस्ता पेयपदार्थहरु पिउनुभन्दा आगोमा भकभकी उमालेको दूध, चिनी हालेको चिया नै बढी फाइदाजनक हुन्छ ।
यस्तो चिया दैनिक १–२ कप पिउँदा केही पनि हानि छैन । तर जसले दैनिक २ कपभन्दा बढी चिया पिउँछ उसले विचार पुर्‍याउनुपर्छ– कस्तो चिया पिउने रु कति कप पिउने रु कुन बेला पिउने रु चिनी–दूध हाल्ने कि नहाल्ने रु आदि । यससम्बन्धमा मेरो अव’धारणा यस प्रकार छ स्
१. यदि तपाईंलाई मधु’मेह रो’ग छ, रग’तमा ट्राइ’ग्लाइसेराइडको मात्रा धेरै बढेको ९४०० भन्दा बढी नै० छ, शरीर मोटो छ भने चियामा चिनी नहालीकन पिउनुहोस् । तपाईंले हरियो चिया पिएको राम्रो ।
२. पेटको समस्या छ, पेट फुल्छ, पोल्छ, ग्यास्ट्रिक बढ्ने समस्या छ, डकार धेरै आउँछ, अमि’ल्युकी आउँछ भने चियामा दूध नहालेको राम्रो । यस्तो समस्या भएकाहरुले दूधविनाको कालो या हरियो चिया पिउँदा राम्रो हुन्छ ।
तर तपाईं चियाको असाध्यै पारखी हुनुहुन्छ, सेतो दूध हालेको चिया मन पराउनुहुन्छ भने खालि पेटमा नपिउनुहोस् । पहिले अलिकति पानी पिउनुहोस् अनि दूध हालेको चिया पिउनुहोस्, दैनिक १ कप’भन्दा बढी सेतो चिया नपिउनुहोस् । कालो चियामा अदुवा मिसाएर पकायो भने स्वाद पनि बढ्छ, पेटलाई फाइदा पनि हुन्छ ।
३. तौल घटाउने इच्छा छ भने दूध–चिनी नहालेको हरियो चिया दैनिक ४ कपसम्म पिउनुहोस् । यो भन्दा धेरै पिउँदा हानि पुग्न सक्छ, विचार पु¥र्‍याउनुहोला ।
४. तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ भने दैनिक २ कपसम्म दूध–चिनी हालेर भकभकी पकाएको नेपाली चिया आन’न्दपूर्वक पिउन सक्नुहुन्छ । चियामा रहेको पौ’ष्टिक त’त्व न’ष्ट भयो भनी चिन्ता नगर्नुहोस्, चियाको स्वादमा रमाउनुहोस् ।
तर दैनिक २ कपभन्दा बढी यस्तो चिया नपिउनुहोस् । धेरै भयो भने यसमा भएको क्याफिनले नशा लाग्छ, उत्तेजित बनाउँछ, अनि’द्रा गराउँछ, रक्तचाप बढाउँछ, मुटुको धड्कन बढाउँछ ।
यसकारण साव’धानीका साथ चियाको म’ज्जा लिनुहोस् । चिया सेतो कि कालो पिउने भन्ने विषयमा धेरै नसोच्नुहोस् । तपाईंलाई जुन चियाको बढी स्वा’द लाग्छ त्यही चिया पिउनुहोस्, तर सा’वधान ∕ धेरै नपिउ’नुहोस् । खबरहब बाट
Prev५० रुपैयाँ किलोको प्याजको मूल्य एक्कासि बढेर एक सय पुग्यो…हेर्नुहोस् ।
Nextरबिन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ : कुलमानलाई दो’स्रो कार्यकाल नदिनु भनेको भ्र’ष्ट राजनीतिको च’रम नमूना हो…सेयर गरौ !
दुर्गेशले आफ्नो पारिश्रमिक आगलागी पी’डितलाई खर्चिए
राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आस्थाको आधारमा शिक्षकहरुलाई भेदभाव गरियो : शिक्षक नेताहरु